थोक मिश्रित ओछ्यान राल निर्माता र आपूर्तिकर्ता | डोong्ली
डोong्ली मिश्रित ओछ्यान रेजिन प्रयोग गर्न को लागी तैयार विशेष गरी पानी को सीधा शुद्धीकरण को लागी डिजाइन गरीएको उच्च गुणस्तर राल मिश्रण हो। घटक रेजिन को अनुपात उच्च क्षमता प्रदान गर्न ईन्जिनियर गरिएको छ। मिश्रित ओछ्यान राल प्रयोग गर्न को लागी तैयार को प्रदर्शन आवेदन मा निर्भर गर्दछ। मिश्रित ओछ्यान रेजिन को धेरै संकेतक जो सञ्चालन को सजीलो को सुविधा जब थकावट को एक साधारण दृश्य संकेत चाहिएको संग उपलब्ध छन्।.
मिश्रित ओछ्यान रेजिन
रेजिन शारीरिक रूप र रूप रचना समारोहसमूह आयोनिक फारम कुल विनिमय क्षमता meq/एमएल नमी सामग्री आयन रूपान्तरण भोल्युम अनुपात शिपिंग वजन जी/एल प्रतिरोध
MB100 स्पष्ट गोलाकार मोती जेल एसएसी R-SO3 H+ १.० ५५-5५% %% ५०% 720-740 > 10.0 MΩ
जेल एसबीए R-NCH3 ओह- १.7 ५०-५५% % ०% ५०%
एमबी १०१ स्पष्ट गोलाकार मोती जेल एसएसी R-SO3 H+ १.१ ५५-5५% %% ४०% 710-730 > 16.5 MΩ
जेल एसबीए R-NCH3 ओह- १. ५०-५५% % ०% %०%
एमबी १०२ स्पष्ट गोलाकार मोती जेल एसएसी R-SO3 H+ १.१ ५५-5५% %% ३०% 710-730 > 17.5 MΩ
जेल एसबीए R-NCH3 ओह- १.9 ५०-५५% % ५% %०%
एमबी १०३ स्पष्ट गोलाकार मोती जेल एसएसी R-SO3 H+ १.१ ५५-5५% %% १ * 710-730 > १.0.० MΩ*
जेल एसबीए R-NCH3 ओह- १.9 ५०-५५% % ५% १ *
एमबी १०४ स्पष्ट गोलाकार मोती जेल एसएसी R-SO3 H+ १.१ ५५-5५% %% भित्री चिसो पानी उपचार
जेल एसबीए R-NCH3 ओह- १.9 ५०-५५% % ५%
फुटनोट * यहाँ बराबर छ; प्रभावशाली कुल्ला पानी गुणस्तर:> १.5.५ MΩ सेमी; TOC <2 ppb
सुपर शुद्ध पानी मिश्रित ओछ्यान राल जेल प्रकार बलियो एसिड cation विनिमय राल र बलियो क्षार आयनों विनिमय राल बाट बनेको छ, र पुनर्जीवित र तयार मिश्रित गरीएको छ।
यो मुख्य रूप बाट पानी को प्रत्यक्ष शुद्धिकरण, इलेक्ट्रोनिक उद्योग को लागी शुद्ध पानी को तैयारी, र अन्य पानी उपचार प्रक्रियाहरु को पछि मिश्रित बिस्तर ठीक उपचार मा प्रयोग गरीन्छ। यो विभिन्न पानी उपचार क्षेत्रहरु को लागी उच्च प्रवाह आवश्यकताहरु संग र उच्च पुनर्जन्म शर्तहरु बिना प्रदर्शन उपकरण, क्यालकुलेटर हार्ड डिस्क, सीडी-रोम, सटीक सर्किट बोर्ड, असंगत इलेक्ट्रोनिक उपकरण र अन्य सटीक इलेक्ट्रोनिक उत्पादन उद्योग, चिकित्सा र चिकित्सा उपचार को रूप मा उपयुक्त छ, कस्मेटिक्स उद्योग, सटीक मशीनिंग उद्योग, आदि
सन्दर्भ संकेतक को उपयोग
1, पीएच दायरा: 0-14
2. स्वीकार्य तापमान: सोडियम प्रकार ≤ 120, हाइड्रोजन ≤ 100
३, विस्तार दर%: (Na + बाट H +): ≤ १०
4. औद्योगिक राल परत उचाई एम: ≥ 1.0
6, पुनर्जन्म खुराक किलो / m3 (१००%अनुसार औद्योगिक उत्पादन): nacl75-150hcl40-100h2so4: 75-150
7, पुनर्जनन तरल प्रवाह दर M / h: 5-8
8, पुनर्जन्म सम्पर्क समय मी inute: 30-60
9, धुने प्रवाह दर M / h: 10-20
10, धुने समय मिनेट: लगभग 30
११, अपरेटिंग प्रवाह दर एम / एच: १०-४०
12, कार्य विनिमय क्षमता mmol / L (गीला): नुन पुनर्जनन ≥ 1000, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पुनर्जनन ≥ 1500
मिश्रित ओछ्यान राल मुख्य रूप बाट पानी शुद्धीकरण उद्योग मा प्रयोग गरिन्छ पोलिशिंग प्रक्रिया पानी को लागी demineralization पानी को गुणस्तर प्राप्त गर्न को लागी (जस्तै रिवर्स असमस प्रणाली पछि)। मिश्रित ओछ्यान को नाम बलियो एसिड cation विनिमय राल र बलियो आधार आयन विनिमय राल सामेल छन्।
मिश्रित ओछ्यान राल को समारोह
Deionization (वा demineralization) मात्र आयन को हटाउने को मतलब। आयनहरु परमाणु वा अणुहरु शुद्ध नकारात्मक वा सकारात्मक चार्ज संग पानी मा पाईन्छ चार्ज गरिन्छ। धेरै अनुप्रयोगहरु को लागी जो एक rinsing एजेन्ट वा घटक को रूप मा पानी को उपयोग गर्दछ, यी आयनहरु अशुद्धता मानिन्छ र पानी बाट हटाउनु पर्छ।
सकारात्मक चार्ज आयनहरु लाई cations भनिन्छ, र नकारात्मक चार्ज आयनहरु लाई anions भनिन्छ। आयन एक्सचेन्ज रेजिन हाइड्रोजन र हाइड्रोक्सिल संग अवांछित cations र anions आदान प्रदान शुद्ध पानी (H2O), जो एक आयन छैन। निम्न नगरपालिका पानी मा साधारण आयनहरु को एक सूची हो।
मिश्रित ओछ्यान राल को कार्य सिद्धान्त
मिश्रित ओछ्यान रेजिन deionized (demineralized वा "Di") पानी उत्पादन गर्न को लागी प्रयोग गरीन्छ। यी रेजिनहरु साना प्लास्टिक मोतीहरु कार्बनिक बहुलक चेन बाट बनेको मोती मा एम्बेडेड चार्ज कार्यात्मक समूहहरु संग बनेका छन्। प्रत्येक कार्यात्मक समूह एक निश्चित सकारात्मक वा नकारात्मक चार्ज छ।
Cationic रेजिन नकारात्मक कार्यात्मक समूहहरु छन्, त्यसैले उनीहरु सकारात्मक चार्ज आयनहरु लाई आकर्षित गर्दछ। त्यहाँ cation रेजिन, कमजोर एसिड cation (WAC) र बलियो एसिड cation (SAC) को दुई प्रकार छन्। कमजोर एसिड cation राल मुख्य रूप मा dealkalization र अन्य अद्वितीय अनुप्रयोगहरु को लागी प्रयोग गरीन्छ। तेसैले, हामी बलियो एसिड cation राल को भूमिका deionized पानी को उत्पादन मा प्रयोग मा ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं।
Anionic रेजिन सकारात्मक कार्यात्मक समूहहरु छन् र यसैले नकारात्मक चार्ज आयनहरु लाई आकर्षित गर्दछ। त्यहाँ anion रेजिन को दुई प्रकार छन्; कमजोर आधार आयन (WBA) र बलियो आधार आयन (SBA)। Anionic रेजिन को दुबै प्रकार deionized पानी को उत्पादन मा प्रयोग गरीन्छ, तर तिनीहरू निम्न फरक विशेषताहरु छन्:
जब मिश्रित ओछ्यान प्रणाली मा प्रयोग गरीन्छ, WBA राल सिलिका, CO2 हटाउन सक्दैन वा कमजोर एसिड बेअसर गर्ने क्षमता छ, र तटस्थ भन्दा कम एक पीएच छ।
मिश्रित ओछ्यान राल माथिको तालिका मा सबै anions हटाउँछ, CO2 सहित, र सोडियम रिसाव को कारण एक दोहोरो स्वतन्त्र बेड प्रणाली मा प्रयोग गर्दा तटस्थ पीएच भन्दा उच्च छ।
Sac र SBA रेजिन मिश्रित ओछ्यान मा प्रयोग गरीन्छ।
क्रम मा deionized पानी उत्पादन गर्न, cation राल हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl) संग पुनर्जीवित छ। हाइड्रोजन (H +) सकारात्मक चार्ज छ, त्यसैले यो नकारात्मक चार्ज cationic राल मोती आफैलाई संलग्न। आयनों राल NaOH संग पुनर्जीवित भएको थियो। Hydroxyl समूहहरु (OH -) नकारात्मक चार्ज छन् र सकारात्मक चार्ज anionic राल मोती संग आफैं संलग्न।
बिभिन्न आयनहरु बिभिन्न शक्ति संग राल मोती को लागी आकर्षित हुन्छन्। उदाहरण को लागी, क्याल्सियम सोडियम भन्दा धेरै बलियो cationic राल मोती आकर्षित गर्दछ। Cationic राल मोती मा हाइड्रोजन र anionic राल मोती मा हाइड्रोक्सिल मोती को लागी कुनै बलियो आकर्षण छैन। यस कारण आयन आदान प्रदान अनुमति छ। जब सकारात्मक चार्ज cation cationic राल मोती को माध्यम बाट बग्दछ, cation विनिमय हाइड्रोजन (H +) हो। त्यस्तै गरी, जब नकारात्मक चार्ज संग आयन आयनों राल मोती को माध्यम बाट बग्दछ, आयन हाइड्रोक्सिल (OH -) संग आदान प्रदान। जब तपाइँ हाइड्रोजन (H +) हाइड्रोक्सिल (OH -) संग जोड्नुहुन्छ, तपाइँ शुद्ध H2O बनाउनुहुन्छ।
अन्तमा, cation र anion राल मोती मा सबै विनिमय साइटहरु माथि प्रयोग गरीन्छ, र ट्यांक अब विआयनीकृत पानी उत्पादन। यस बिन्दु मा, राल मोती पुन: उपयोग को लागी पुनर्जीवित गर्न को लागी आवश्यक छ।
किन मिश्रित ओछ्यान राल छान्नुहोस्?
तसर्थ, पानी उपचार मा ultrapure पानी तयार गर्न को लागी कम्तीमा दुई प्रकार का आयन विनिमय रेजिन आवश्यक छ। एक राल सकारात्मक चार्ज आयनहरु लाई हटाउनेछ र अर्को नकारात्मक चार्ज आयनहरु लाई हटाउनेछ।
मिश्रित ओछ्यान प्रणाली मा, cationic राल सधैं पहिलो स्थानमा छ। जब नगरपालिका पानी cation राल भरिएको ट्याers्की प्रवेश, सबै सकारात्मक चार्ज cations cation राल मोती द्वारा आकर्षित र हाइड्रोजन को लागी आदान प्रदान गरीन्छ। नकारात्मक चार्ज संग anions आकर्षित र cationic राल मोती को माध्यम बाट पारित हुनेछैन। उदाहरण को लागी, फिड पानी मा क्याल्सियम क्लोराइड को जाँच गरौं। समाधान मा, क्याल्सियम आयनहरु सकारात्मक चार्ज गरीन्छ र हाइड्रोजन आयनहरु रिलीज गर्न को लागी cationic मोती संग जोडिएको छ। क्लोराइड एक नकारात्मक चार्ज छ, त्यसैले यो cationic राल मोती आफैलाई संलग्न गर्दैन। सकारात्मक चार्ज भएको हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल) बनाउन क्लोराइड आयनसँग जोडिन्छ। थैली एक्सचेन्जर बाट परिणामस्वरूप प्रवाह एक धेरै कम पीएच र आगमन फीड पानी को तुलना मा एक धेरै उच्च चालकता हुनेछ।
Cationic राल को effluent बलियो एसिड र कमजोर एसिड बनेको छ। त्यसपछि, एसिड पानी anion राल संग भरिएको टैंक मा प्रवेश हुनेछ। Anionic रेजिन नकारात्मक चार्ज anions जस्तै क्लोराइड आयनहरु लाई आकर्षित र हाइड्रोक्सिल समूहहरु को लागी आदान प्रदान गर्दछ। परिणाम हाइड्रोजन (H +) र हाइड्रोक्सिल (OH -) हो, जुन H2O बन्छ
वास्तव मा, "सोडियम रिसाव" को कारण, मिश्रित ओछ्यान प्रणाली वास्तविक H2O उत्पादन गर्दैन। यदि सोडियम क्याशन एक्सचेन्ज ट्या्क को माध्यम बाट लीक हुन्छ, यो हाइड्रोक्सिल संग मिल्छ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो उच्च चालकता छ बनाउन को लागी। सोडियम रिसाव हुन्छ किनकि सोडियम र हाइड्रोजन को cationic राल मोती को लागी धेरै समान आकर्षण छ, र कहिले काहिँ सोडियम आयनहरु हाइड्रोजन आयनहरु आदान प्रदान गर्दैनन्।
मिश्रित ओछ्यान प्रणाली मा, बलियो एसिड cation र बलियो आधार आयनों राल एक साथ मिश्रित छन्। यो प्रभावी ढंगले मिश्रित ओछ्यान ट्या्क एक ट्या in्क मा मिश्रित ओछ्यान एकाइहरु को रूप मा काम गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ। Cation / anion विनिमय एक राल ओछ्यान मा दोहोर्याइएको थियो। दोहोर्याइएको cation / anion विनिमय को एक ठूलो संख्या को कारण, सोडियम लीकेज को समस्या हल भयो। एक मिश्रित ओछ्यान को उपयोग गरेर, तपाइँ उच्चतम गुणस्तर deionized पानी उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो: बलियो एसिड cation विनिमय राल
अर्को: निष्क्रिय र बहुलक मोती